YM -280M (SS304) 600Lbs mkpọchi magnetik ọnụ ụzọ nwere ndị nrụpụta na ndị na -ebupute ugwu - YLI ELECTRONICï¼ˆASIAï¼ ‰ LTD
Ulo > Mkpọchi Magnetik > Mkpọchi Magnetic 600Lbs > YM-280M (SS304) 600Lbs mkpọchi ọnụ ụzọ ndọta nwere ọnụ ugwu Mortise
YM-280M (SS304) 600Lbs mkpọchi ọnụ ụzọ ndọta nwere ọnụ ugwu Mortise
YM-280M (SS304) otu mkpọchi eletriki ụlọ bụ maka ọnụ ụzọ iko, ọnụ ụzọ osisi, ọnụ ụzọ ọkụ, ọnụ ụzọ igwe. Mortise ugwu ma dị mfe ịwụnye. Ngwa maka n'ọnụ ụzọ mgbagharị, ọnụ ụzọ iko enweghị frame, ọnụ ụzọ etiti warara na ihe ndị ọzọ dị. N'ikpeazụ, ike ijide bụ 600lbs.
YM-280M (SS304) otu mkpọchi eletriki ụlọ bụ maka ọnụ ụzọ iko, ọnụ ụzọ osisi, ọnụ ụzọ ọkụ, ọnụ ụzọ igwe. Mortise ugwu ma dị mfe ịwụnye. Ngwa maka ụzọ mgbagharị, ọnụ ụzọ iko enweghị frame, ọnụ ụzọ etiti warara na ihe ndị ọzọ dị. N'ikpeazụ, ike ijide bụ 600lbs.
Nha 231.5Lx41Wx26.5H (mm)
Mechie mkpuchi 304 igwe anaghị agba nchara
Ọnụ IP IP-65
Tags na-ekpo ọkụ: YM-280M (SS304) 600Lbs mkpọchi ọnụ ụzọ ndọta nwere ọnụ ugwu, ndị na-emepụta ihe, ndị na-ebubata ya, ụlọ ọrụ, ahaziri ya, nnukwu, nlele efu, China, emere na China, ego, zụrụ ego, ọnụ ahịa, ndepụta ọnụahịa, kwuru, CE, ISO9001, Ogo